Saika Nifarana Tamin’ny Famongorana Ny Governemantan’i Aostralia Eo Amin’ny Fitondràna ny Fifidianana Nampitebiteby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2016 11:00 GMT
Sariitatr'i Malcolm Turnbull. Sary an'ilay mpampiasa Flickr, DonkeyHotey (CC BY-NC-ND 2.0)
Nila herinandro mahery ny Praiminisitra Aostraliana, Malcolm Turnbull, vao afaka nilaza ny fandreseny tamin'ireo fifidianana faobe natao ny 2 Jolay 2016. Nahazo seza farafahakeliny 76 tamin'ireo 150 ny governemantany, ny Fiaraha-mitantana Nasiônaly Malalaka, izay nanome azy ny maro an'isa tamin'ny alàlan'ny seza iray anatin'ny Antenimieram-pirenena.
Na taorian'ny fandreseny kely aza anefa, mbola nisy seza iray farany iadiana. Tsy mbola feno, hatramin'ny 18 Jolay, ny fanisàna ireo vato ho an'i Herbert, ilay fifidianana farany sisa mila tapahina ao amin'ny Antenimierampirenena. Tamin'ny farany, nandresy ny mpifaninana avy amin'ny mpanohitra, na teo aza ny toetra feno fanantenan'ny praiminisitra:
.@TurnbullMalcolm ‘confident, optimistic’ @EwenJonesMP will win Herbert and take Coalition to 77 seats #ausvotes @abcnews
— Dan Conifer (@DanConifer) July 13, 2016
.@TurnbullMalcolm ‘mahatoky tena, feno fanantenana’. Hahazo ny Herbert ary hamela ny Fiaraha-mitantana hanana seza 77 i @EwenJonesMP,
Nanonona an'i Turnbull ireo tati-baovao:
Nilaza ny Praiminisitra Malcolm Turnbull fa mahatoky izy fa harovan'ny Fiaraha-mitantana ny sezan'i Queensland izay hanome azy ny maro an'isa kely — seza roa monja miala aminà Parlemanta tsy misy maro an'isa.
Tsy mampino, vato valo (0.0091%) no elanelan'ny fandresena tanatinà seza ahitàna mpifidy nisoratra anarana miisa 104.841.
Vokatry ny fifidianana tao Herbert, taona 2016 – Dikasary avy tamin'ny aec.gov.au
Zavatra tsy maintsy hatao ny fifidianana any Aostralia, kanefa mbola misy 9.57% ihany ireo tsy nifidy tany Herbert. Mety ho nanova ny vokatra tao Herbert ny fiara fitateram-bahoaka kely iray feno an'ireo olona nieritreritra fa tsy hampiova na inona na inona loatra ny safidiny.
Fanampin'izany, nisy vato maty niisa 6.444 izay tsy namenoan'ireo mpifidy tsara ny biletany.
Kanefa, tsy mbola tapitra io, satria hanao famerenana fanisam-bato izay mety haharitra andro maro na herinandro maro mihitsy aza, ny Kaomisiôn'ny Fifidianana Aostraliana.
Nanazava i Adrian Beaumont avy ao amin'ny The Conversation, tanatin'ny andinin'ny Fanakarana ny dikan'ireo Fitsapankevitra:
Raha mitazona ny toerany ao Herbert ny Antokon'ny Mpiasa, dia hahazo fahamaroan'isa tsotra anà seza 76 amin'ireo seza 150 ny Fiaraha-mitantana, miaraka amin'ireo 69 an'ny Antokon'ny Mpiasa sy ireo 5 tsy miankina. Aorian'ny fanendrena ny Filoha, mety hahazo 75 amin'ireo vato 149 ny Fiaraha-mitantana, ary mety hiatrika ny tsy fahombiazan'ny farany havanana i Turnbull.
Sarotra ny rafi-pifidianana ao Aostralia, izay angatahana ireo mpifidy mba hametraka tarehimarika mifanaraka amin'ny fitiavany an'ireo mpifaninana tsirairay ao amin'ny biletàm-pifidianana ny Antenimierampirenena. Afaka mijery ny fahasarotany eto sy eto ireo mpianatra vao misondrotra mianatra ireo fizotry ny fifidianana ( ireo psekolozista).
Mety tsy maintsy hasiam-panovàna ihany koa ireo antontanisa sasany mikasika ny fifandanjan'ny lahy sy ny vavy ao amin'ny parlemanta, rehefa faranana ny vokatry ny Herbert:
20% amin'ireo “Lib MPs” no vehivavy.
36% of Labor MPs were women
16% of Lib MPs are women
42% of Labor MPs are women#ausvotes
— Bridget O'Flynn (@BridgetOFlynn) July 12, 2016
Ny Parlemanta farany teo:
20% tamin'ireo solombavambahoaka Liberaly no vehivavy.
36% tamin'ireo solombavambahoaka avy amin'ny Antokon'ny Mpiasa no vehivavy
Amin'ity Parlemanta ity
16% amin'ireo solombavambahoaka Liberaly no vehivavy
42% amin'ireo solombavambahoaka avy amin'ny Antokon'ny Mpiasa no vehivavy #ausvotes
Mandritra izany, mbola miandry ny vokatry ny Antenimierandoholony hatrany i Oz. Manome sombiny amin'ny fahasarotany ny biletan'i Victoria. Tena tsy nety napetraka nivelatra tsara mihitsy ilay taratasy tao amin'ny biraom-pifidianana. Niisa 116 ireo mpifaninana. Ny Nouvelle Gales du Sud no teo amin'ny loha-lisitr'ireo fanjakàna miaraka amin'ireo mpifaninana miisa 151.
Biletàm-pifidianana ho an'ny Antenimierandoholon'i Victoria. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr David Jackmanson (CC BY 2.0)
Mety tsy ho fantatra mialoha ny volana Aogositra ny vokatra faran'ny Antenimierandoholona.
Zavatra iray no tsy azo iadian-kevitra. Toa tsy nahomby ilay fanambin'i Malcolm Turnbull hiantso fifidianana iray ho an'ireo Antenimierandoholona rehetra. Nanantena izy fa izany dia mety ho manamora kokoa ny fandaniana io lalàna io.
Mampiseho asa mavesatra ho an'ny governemanta ny faminanian'i Adrian Beaumont:
Amin'ny vokatry ny Antenimierandoholona amin'izao, afaka mieritreritra ny handresy seza 32 amin'ireo 76 farafahabetsany ny Fiaraha-mitantana, izay ho fahaverezan-tseza iray avy amin'ny fanomanam-pifidianana ao amin'ny Antenimierandoholona. Na mety ho azo aza ireo seza 32, ny mety tena hiseho izao dia 30 ho an'ny Fiaraha-mitantana, 27 ho an'ny Antokon'ny Mpiasa, 9 ho an'ny Antoko Maitso ary 10 ny an'ny Hafa. Hila 9 amin'ireo Hafa noho izany ny Fiaraha-mitantana mba handaniana lalàna toherin'ny Antokon'ny Mpiasa sy ny Antoko Maitso (very ny fitovian-kevitra ao amin'ny Antenimierandoholona).
Mihomehy noho ny fanantenana amin'ny mety hisian'ny korontana anivon'ireo mpanao lalàna ny mpampiasa Twitter iray:
I wish to thank the Hon The #PrimeMinister for providing the Nation with at least 3 years of high farce in the #Senate #ComicRelief #auspol
— HARPERHP (@WhistonChris) July 18, 2016
Te hisaotra ny Praiminisitra Hajaina aho amin'ny fanomezany ny Fanjakàna farafahakeliny 3 taona feno hatsikana ao amin'ny Antenimierandoholona
Raha te hahalala ny andinindininy bebe kokoa amin'ireo fifidianana Aostraliana 2016 ianao dia iangaviana hitsidika ny Miandry ny Fanisam-bato Farany i Aostralia Raha Mifotitra amin'ny Praiminisitra ‘Fizza’ ny Fifidianana